Maalinta: Diseembar 11, 2017
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, booqashadiisa ka dib markii uu booqday Guddoomiyaha Sivas Davut Gul, wuxuu qabtay shir jaraa'id oo uu ku qiimeynayay xiriirka Erdogan ee Sivas. Gul, oo xafiiskiisa kula kulmay xubno ka tirsan saxaafadda oo ku sugan Sivas [More ...]
Dowlada hoose ee magaalada Kahramanmaraş waxay siisay shahaadooyin aqoonsi ah darawallada gaadiidka dadweynaha. Xoghayaha Guud Züver Çetinkaya, Madaxa Waaxda Adeegyada Gaadiidka, Yusuf Deliktaş, Uruuriyaha xafladda shahaadada ee lagu qabtay Hoolka Golaha Magaalada Caasimadda ee Kahramanmaraş [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay sii wadaysaa adeegyadeeda gaadiid si ay u balaariso iskuxirka gaadiidaka magaalada oo waara oo loo hubiyo isticmaalka baahsan ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada dhexdeeda. Waxaa mahad leh adeegyada gaadiid ee ay bixiso Dowlada Hoose ee Magaalooyinka, [More ...]
Sanliurfa ayaa la kulmay ururada aan dowliga ahayn ee Gaadiidka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, gobolka ayaa sidoo kale sameeyay warbixinno ku saabsan mashruucyada tareenka ee deg degga ah. Wadada tareenka xawaaraha sare ee Sanliurfa oo leh waddo caalami ah [More ...]
TCDD si ay u dhisto darbiga derbiga Gebze-Arifiye YHT
TCDD waxay sameyn doontaa daraasad gaar ah wadada HAWADA. Sida laga soo xigtay daraasaddan, darbiga dhawaaqa ayaa laga dhisi doonaa jidka 80 kiiloo mitir ee u dhexeeya Gebze iyo Arifiye, iyo buuqa tareenka ayaa joogsan doona. Agaasinka Guud ee Maamulka Tareenka Waddooyinka [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa yidhi, Casri Waxaan sidoo kale casriyeynaynaa khadka ka iman doona Samsun ilaa Sivas .. Madaxweyne Recep Tayyip Erdo ,an, wuxuu qabtay xafladda caanka ah ee AK Party Sivas Madaxweynayaasha Gobollada 6. Wuxuu aaday Sivas si uu uga qeyb galo Shirka Caadiga ah [More ...]
Waxaa sidoo kale jira tareen degdeg ah magaalooyinkaas! Van mar dambe ma jiro ...
Eastern Turkey ayaa sannadihii la soo dhaafay soo gaaray tan iyo bilowgii oo ka mid ah labada Magaalo ee weyn ee weerarada tareen dheeraad ah oo degdeg ah magaalooyin badan. Van weli waa jadwalka ma ... 10 tallaabo muhiim ah sannadihii la soo dhaafay oo duurka ku ah gaadiidka Turkey waxaa lagu tuuraa. [More ...]
Tani waa madaarka seddexaad ee subaxdii laga eego meel bannaan
Istanbul waxaa lagu soo bandhigay markii ugu horeysay jiilka cusub ee teknolojiyadda sawir qaadista ee NASA. Astronaut Randy Bresnik, oo soo jiitay Istanbul subaxnimadii maanta, ayaa qaabkan ku wadaagay akoonkiisa Twitter. Mid ka mid ah astronauts-ka Xarunta Caalamiga ah ee Hawada [More ...]
Halkalınidaamka keliya ee ka soo jeeda Gebze
Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badhiga iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, Halkalı - Gebze wuxuu bixiyay macluumaad ku saabsan dhismaha xeryaha socda ee socda. Arslan wuxuu sheegay in Marmaray iyo khadadka magaalooyinka aaney gaarin kala duwanaan [More ...]
3.Havaliman Metro Line ayaa la qorsheeyay in lagu furo 2019
Wasiirka Gaadiidka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, Dakar, caasimadda Senegal, ayaa hadal uu ku sheegay xubnaha saxaafadda ee 3.Havalimanda Metro Line waxaa loo qorsheeyay inuu furmo 2019'da. Wasiirka Arslan “Pendik-Kaynarca-Sabiha Gökçen Airport-ka howlaha dhismaha ee dhulka hoostiisa mara [More ...]
Heshiiska Mashruuca Tiknoolajiyada Sisliurfa-Gaziantep wuxuu ahaa mid lagu saxiixayo 2018
Ahmet Arslan wuxuu siiyay injiilka laba kale. Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa bayaan ka soo saaray tareenka xawaare sare ku socda maanta. Tareen xawaare sare leh oo udhaxeeya Gaziantep iyo Şanlıurfa [More ...]
Turel's 2019 Agenda Metro
Duqa magaalada Antalya Metropolitan Munderes Türel, 3. Iyadoo la isku diyaarinayo in loo keeno Mashruuca Nidaamka Raadinta Marxaladda Antalya, metro-ka shaqeynta ee isku xiri doona Konyaaltı iyo Lara wuxuu ka bilaaban doonaa 2019. Madaxweyne Menderes Türel 2019 [More ...]
Erdogan: Mashruuca Ankara-Sivas YHT wuxuu dib u dhigi doonaa dib-u-dhacyo
Isaga oo ka hadlayey xaflad furitaan ballaaran oo ka dhacday Sivas, ayuu Madaxweyne Erdogan, "Mashruuca tareenka xawaare ee Ankara-Sivas ee horseeday dib u dhaca shaqsigu wuxuu waydiin doonaa xisaabta," ayuu yidhi. Isagoo ka hadlayey xaflad furitaan ballaaran oo ka dhacday Sivas, ayuu Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan yiri, isaga oo aadaya 15-kii hore [More ...]
RayHaber 11.12.2017 Warbixinta Shirka
Asphalt iyo tuubistu waxay u shaqeeyaan khadadka taraamka